भारत मा क्विकर जॉब्स - करियर मा मुम्बई - दिल्ली मा रोजगार
भारत मा क्विकर जॉब्स
भारतमा क्यारियरका लागि क्विकर जॉब्स वेबसाइट। तिमी सक्छौ काम रिक्त पदहरूको संख्यामा लागू गर्नुहोस्। रोजगार खोज्नुहोस् जुन तपाइँको प्रोफाइलसँग प्रासंगिक छ। Quikr रोजगार कम्पनी नौकरी खोजकर्ताहरूको लागि समीक्षा अब उपलब्ध छ। र अब तपाईंले हेर्नु पर्छ दुबई मा राम्रो रोजगार। हाम्रो सेवाहरूमा तपाईले एक नजर राख्नुपर्दछ। हामी दुबईमा रोजगारीका लागि सबै भन्दा राम्रो सम्भव स्रोतहरू प्रदान गर्दैछौं। हामी कामदारहरूलाई काममा लगाइरहेका छौं। र त्यो तथ्य हो। दुबई शहर कम्पनी एक शीर्ष प्रदायक हो अमीरातका कामहरू। वास्तवमा भन्ने हो भने, हामी छौं अब विदेशमा काम गर्न सहयोग गर्दै.
युएई र अबु धाबीमा रोजगारहरू विदेशीहरूका लागि राम्रो छन्। यो दिमागमा, हामी नयाँ कामदारहरू खोजिरहेका छौं। संयुक्त अरब अमीरातमा उनीहरूको अनन्त अवसरहरू। हामी खाडी क्षेत्रमा भर्ती। त्यसोभए, हाम्रो कम्पनी क्यारियर खोजीकर्ताहरूबाट प्रेरित छ। भर्ती सेवाहरू जुन हामी प्रदान गर्छौं एक उच्च स्तरमा छन्।
त्यसो भए हाम्रो कम्पनी अगाडि हेर्दै छ तपाईंलाई बोर्ड मा प्राप्त गर्न। हामी विदेशमा कामदारहरूलाई सहयोग गर्दै छौं। To विदेश फर्कनु। त्यसोभए दुबई सिटी कम्पनीले मध्यपूर्वभरि काममा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ। हाम्रो टीमको लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण सम्झौता हो उम्मेद्वार प्रोफाइलहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्। हाम्रो फर्म, सामान्यतया बोल्दै, काम गरिरहेको छ। किनकि हामी छौं अब भारत र पाकिस्तानबाट बसाईरहेका मानिसहरू। हाम्रो कम्पनीको प्राथमिकताका रूपमा। किनभने हामी दृढ विश्वास गर्छौं कि रोजगार खोज। कामदारहरूको लागि लामो प्रक्रिया हो। विशेष गरी संयुक्त अरब अमीरातमा। त्यसो भए यो दिमागमा राख्यौं, हामीले प्रदान गरेका थियौं Expats को लागी मार्गदर्शन.
के तपाईं कामको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ?
हामी तपाईंलाई रोजगार पाउन मद्दत गर्न सक्छौं!
भारत मा क्विकर जॉब्स - दिल्ली, मुम्बई, बेंगलोर
मा कम्पनी भारत क्षेत्र। निश्चित रूपमा अधिक कर्मचारीहरूको लागि तत्पर छन्। र यसको उदाहरण मध्ये कुनै पनि विपणन कम्पनीहरू हो। साथै वित्तीय कम्पनीहरू। यसका साथै, तपाईले पाउनु हुने सब भन्दा महत्वपूर्ण कामहरू क्विकर पोर्टलको साथ हुन्। उदाहरणको लागि, फोर्ब्स एक्सएनयूएमएक्स मा शीर्ष-स्थान निर्धारण फर्म हो मुम्बईमा भर्ती। किनकि भारतीय बजार मध्यपूर्वसँगै बढिरहेको छ र अगाडि बढिरहेको छ। र अधिक नयाँ सम्भावित कामदारहरूको आवश्यक पर्दछ शीर्ष शहरहरूमा काम गर्नका लागि.
त्यसो भए, सामान्यतया, लोकप्रिय निगमहरूलाई समस्या हुँदैन काम खोज्नेहरू प्राप्त गर्न। कम्पनीले सोशल मिडियामा काम लिइरहेको छ। उदाहरण को लागी लिङ्कडिनमा क्विकर। साथै लोकप्रिय नौकरी साइटहरु जस्तै वास्तवमा र नार्कि। त्यसो भए, यो पुष्टि भयो कि कम्पनी नक्कली व्यवसाय होइन। हाम्रो कम्पनी कडा सल्लाह यस कम्पनीको खोजी कार्य गर्न प्रयोग गर्नुहोस्.
मुम्बई र दिल्लीमा भर्ती!
दुबई सिटी कम्पनी - CV आज अपलोड गर्नुहोस्!
क्विकर रोजगारीको साथ मध्य पूर्व मा भर्ती
को लागी राम्रो सम्भावनाहरु काम खाडी क्षेत्रमा छन्। र यो दिमागमा, हामी छौं युएई र कतारमा सहयोग गर्दै। यसबाहेक, हामीसँग कुवेत र बहरिनबाट केही अनुरोधहरू छन्। ती सबैले हामीलाई विशाल सम्भावित बजार बाँचिरहेका छौं। अर्कोतर्फ, हामी धेरै कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौं। उदाहरणका लागि नौक्रि गल्फ, Uber र जेरी वर्गिस। र यो फर्म शीर्ष छ रोजगार खोज्नेहरूको लागि कम्पनी। यसको उदाहरण मध्ये एक तिनीहरूको व्यावसायिक दृष्टिकोण हो। धेरै व्यक्ति खोजी गर्दै यस वेबसाइट साइट को लागी रोजगार.
त्यसो भए, मानक अनुभवमा आधारित। एकदम धेरै workers सबै भन्दा राम्रो कम्पनी प्राप्त गर्न को लागी हेरिरहेका छन्। र यो बिन्दु, नौकरी पोर्टल निश्चित रूपमा तपाईको लागि हो। तब सम्म म तिमीलाई देख्छु एयरपोर्ट रोजगार पाउनुहोस्। यो कम्पनी तपाईंको लागि सबैभन्दा उत्तम छनौट बन्नुहोस्। सामान्यतया, हाम्रो कम्पनीले रोजगार स्पिकरहरूलाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ। र यो फर्म हो विदेशमा कामदारलाई काममा लिदै.
राम्रो बिन्दु मध्ये एक। यो कम्पनी भारत बजार मा धेरै राम्रो गइरहेको छ। यसबाहेक, त्यहाँ धेरै छन् रोजगार लेख यस कम्पनीको बारेमा सामान्यतया, मुख्य उदाहरण कम्पनी प्रोफाइल हो। उच्च रेटेड अनलाइन। र तिनीहरूको आकार को कारण। उद्धरण एक्स्पो जस्तै ठूलो संगठन। पक्कै, तिनीहरू सक्नुहुन्छ रोजगार प्रस्तावहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्.
र विश्वभरि कामदारहरू। यस कम्पनीको खोजी गर्दै एक सकारात्मक काम साइट को रूप मा। यसको सामना गरौं यो फर्मले भारतीय श्रमिकहरूलाई अत्यधिक सल्लाह दिइरहेको छ। यसबाहेक, नयाँ भर्खरै स्नातक विद्यार्थीहरु। तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्षम छन्। साथै व्यवस्थापन अधिकारीहरु। अत्यधिक भुक्तानी पाउँदै टर्कीबाट रोजगार प्रस्ताव। अर्कोतर्फ, दैनिक रोजगार प्रस्तावहरू अपडेट छन्। धेरै मानिसहरू संसार भर बाट आएका, उदाहरणका लागि, श्रीलंका बाट expats। यसबाहेक, भारत र संयुक्त अरब अमीरात। त्यसोभए, नयाँ सम्भावित रोजगार खोजी गर्नेसँग ठूलो मौका छ रोजगार प्रस्ताव प्राप्त गर्न तिनीहरुसँग।
यो कम्पनीले पोष्ट गर्दैछ 30,000 रोजगारी प्रदान गर्दछ। अहिले सम्म त्यो दैनिक अपडेट गर्दैछ। यसबाहेक, विश्वभरिबाट नयाँ व्यक्तिहरू त्यहाँ CV पोष्ट गर्दै। उदाहरणका लागि भारतीय काम खोज्नेहरू। तिनीहरूमा मात्र बगिरहेको छ। साथै पाकिस्तानी र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा। सामान्यतया, बोल्दै, यस कम्पनीमा आफ्नै पुनः पोष्ट गर्दै। त्यसैले यो कम्पनी भारतमा मात्र राम्रो जागिरको प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ?। होईन, तिनीहरू दुबईमा जागिर खाइरहेका छन् र विश्वव्यापी भ्रमणका लागि तयार छन्। तपाई दुबैमा टाढा टाढा र ब्लगर बन्न सक्नुहुनेछ।.
मैले क्विकर कार्यको वेबसाइट किन प्रयोग गर्नुपर्छ?
सबै भन्दा राम्रो पोइन्टहरू मध्ये एक, सामान्यतया बोल्दै काम को तरीका। र यो फर्मका लागि, तपाईं एक मूल्यवान expat हुन सक्छ। सकारात्मक पक्ष भनेको तपाईं साँच्चिकै गर्न सक्नुहुन्छ चाँडो काम पाउनुहोस्। र धेरै भारतीयहरूलाई यो धमनी थाहा छ। तपाईं कहाँबाट आउनु भएको फरक पर्दैन। सामान्यतया, तपाईं यसलाई धेरै राम्रो तरिकाले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र धेरै धेरै अन्य काम साइटहरू भन्दा छिटो.
अर्कोतर्फ दुबई सिटी कम्पनी पनि सँगै काम गर्दैछ दुबईको बारेमा मार्गदर्शन गर्न राम्रो ब्लग पोष्ट। सामान्यतया, हामी पोस्ट गर्दै छौं दुबईमा सल्लाहहरूको बारेमा लेख र कसरी अन्य कम्पनीहरू महान छन्। त्यसो भए नयाँ कामदारहरूले हाम्रो काममा मूल्य खोज्छन्। र ठाँउमा हामी कती राम्रो छौं जान्ने जहाँ काम को लागी हिट गर्ने। यसबाहेक, हामी यो गरिरहेका छौं किनकि हामी युएईमा विश्वास गर्दछौं। विशेष गरी दुबई र अबू धाबी। सरल तरीका भनेको कार्यको उत्तम तरीका हो। र यस कम्पनीले काम गर्ने तरीकाको कारण। छ अवसरको लागि उच्च-वर्ग प्रदायक.
तपाईंको काम खोज प्रोफाइल को वेबसाइट पर भर्ती छ
सामान्यतया, हामी प्रदान गर्दै छौं Expats को लागी सबै भन्दा राम्रो अवसर। युएईमा हाम्रो मानव संसाधन निर्देशक। जहिले पनि उत्प्रेरित गर्नुहोस्, र भन्नुहोस् हरेक काम खोजीकर्ता जो भारतमा बसिरहेका छन्। उनीहरूसँग काम गर्ने मौका छ। हाम्रो फर्म पहिले नै यो कम्पनी संचालित कसरी देख्यो। र हामी उनीहरूसँग काम गर्न सल्लाह दिन्छौं। सामान्यतया हाम्रो दृष्टिकोणबाट बोल्दै। भारत र युएई बजार बढ्दो छ। नयाँ मान्छे जो दुबईमा बस्न र काम गर्न चाहन्छन्। हाम्रो कम्पनीमा सीभी ड्रप गर्नु पर्छ। र निश्चित रूपमा यसमा एक पुनःसुरू अपलोड गर्नु पर्छ भर्ती एजेन्ट.
यस समयमा क्वार्क रोजगारहरू शीर्षमा छन्। र यो कम्पनी भारत मा सब भन्दा ठूलो रोजगार साइट हो। 160,000 भन्दा बढि काम खोज्नेहरू उनीहरूसँग क्रिप्टो रोजगारहरू खोजी गर्दै! वास्तविकतामा, त्यहाँ कुनै तरिका छैन जुन अर्को कम्पनी यस फर्मको आकार हुन गइरहेको छ। केवल किनभने MBA सम्मको स्तरमा पुग्न। कम्पनी अपरेशनको लामो समय हो।
त्यसो भए, तपाईले आफ्नो अद्यावधिक गरिएको प्रोफाइल पोष्ट गर्नुभयो। तिमी सक्छौ काम सकेसम्म छिटो प्राप्त गर्नुहोस्। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं विदेशबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने र भारतमा सकारात्मक रोजगारदाता खोज्दै। सामान्यतया, तपाईंले आफ्नो विवरण दर्ता गर्नुपर्दछ.
फेरी तपाइँ अझ जानकारी को लागी प्रतिक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। यस कुरालाई ध्यानमा राखी उनीहरूको भारत साइटमा पुनःसुरु र पोष्ट प्राप्त गर्नुहोस्। र बस प्रतीक्षा गर्नुहोस् नयाँ रोजगार को लागी तपाइँको emai मा आउन को लागीl.we यकिन छैन भने दुबई मा रोजगार को लागी भर्ती। Quirk रोजगार वेबसाइटको साथ सम्भव छ।
भारतीय कामदारहरू नयाँ जागिरमा सर्दै छन्। र क्विकर रोजगार साइटले तिनीहरूलाई राख्दैछ। सकारात्मक पक्ष मा, यो जान र एक CV अपलोड गर्न लायक हुनेछ। नयाँ रोजगारीहरू बढ्दैछ त्यसैले तपाईंलाई कहिले थाहा हुँदैन कहिले तपाईंलाई राख्नुहुन्छ।